Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu Brussels na-ewepụta njirimara ọhụrụ
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Airport • Aviation • Akụkọ kacha ọhụrụ na Belgium • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • investments • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ụgbọ elu Brussels na-ewepụta njirimara ọhụrụ.
Ụgbọ elu Brussels na-elekwasị anya na mpaghara Afrịka ma gosipụta ọnọdụ ya n'ahịa na njirimara ọhụrụ.
Ụgbọ elu Brussels kwalitere ma gbasie ike na 2020 atụmatụ mgbanwe ya Reboot Plus, iji meghee ụzọ maka ụlọ ọrụ na-egosi n'ọdịnihu nke nwere ike ihu asọmpi ahụ, na-eji usoro ọnụ ahịa dị mma ma dị mma.
Mgbe nhazigharị ahụ gasịrị, ụlọ ọrụ ahụ malitere akụkụ nke abụọ nke atụmatụ Reboot Plus: usoro ewulite na nkwalite.
Ụlọ ọrụ Belgium na-agbanwe ka ọ bụrụ ụgbọ elu dị mma, nke na-erite uru nke na-enye ndị ahịa ya, ndị mmekọ na ndị ọrụ ya echiche.
Taa, ụgbọ elu Brussels na-ewepụta njirimara ọhụrụ, na-akwado ọnọdụ ya n'ahịa dị ka onye na-ebu ụgbọ ala Belgium na ọkachamara Africa. Lutù Lufthansa.
Agba emelitere, akara ọhụrụ na ime ụgbọ elu bụ akara ngosi nke isi ụgbọ elu ọhụrụ, na-ekwupụta njikere ya maka ihe ịma aka n'ọdịnihu yana na-ekwughachi mkpa nke ika Belgium. Isiakwụkwọ na-elekwasị anya siri ike na ahụmịhe ndị ahịa, ntụkwasị obi na nkwado mgbe ị na-edobe ụkpụrụ-ụkpụrụ asọmpi.
N'ihi ọgba aghara COVID-19, Brussels Airlines gbagoro ma gbasie ike na 2020 atụmatụ mgbanwe ya Reboot Plus, iji meghee ụzọ maka ụlọ ọrụ na-egosi ọdịnihu nke nwere ike ihu asọmpi ahụ, yana usoro ọnụ ahịa dị mma na ahụike.
Onye isi oche nke Ndị njem nlegharị anya nke Africa (ATB), Cuthbert Ncube, na-anabata njem a nke Brussels Airlines, dị ka ọ dabara na ozi nke ATB iji kwalite Africa dị ka otu ebe site n'ịgbasa njem na njem nlegharị anya nhọrọ.
Mgbe nhazigharị ahụ gasịrị, ụlọ ọrụ ahụ malitere akụkụ nke abụọ nke atụmatụ Reboot Plus: usoro ewulite na nkwalite. Brussels Airlines ugbu a na-atụgharị uche ya n'ọdịnihu na atụmatụ itinye ego na ahụmịhe ndị ahịa ka mma, teknụzụ ọhụrụ, digitization, ụzọ ọhụrụ nke ịrụ ọrụ na mmepe nke ndị ọrụ ya.
Ụlọ ọrụ Belgium na-agbanwe ka ọ bụrụ ụgbọ elu dị mma, nke na-erite uru nke na-enye ndị ahịa, ndị mmekọ na ndị ọrụ echiche echiche; ụgbọ elu nke na-elekwasị anya mgbe niile na gburugburu ebe obibi na mbelata akara ukwu nke gburugburu ebe obibi. Ụgbọ elu Brussels ọhụrụ.
"Anyị chọrọ akara n'ụzọ doro anya mmalite nke Ọhụrụ Brussels Airlines. Maka ndị ahịa anyị, ndị kwesịrị ihe kacha mma, kamakwa maka ndị ọrụ anyị, ndị na-agba mbọ na mgbanwe nke anyị na-aga n'ihu na nke ha na-enye onyinye kwa ụbọchị. Ọ bụ ya mere taa anyị na-ewepụta nsụgharị anya nke mmalite ọhụrụ anyị. Site na njirimara ọhụrụ a, anyị dị njikere igosi ndị ahịa anyị, ndị ọrụ anyị, ndị mmekọ anyị na ndị ọzọ niile metụtara na anyị na-atụgharị ibe. Dịka otu n'ime ụgbọ elu netwọkụ Lufthansa Group anọ, anyị na-ewu ụzọ maka ọdịnihu na-ekwe nkwa. Anyị na-ahụ njirimara ọhụrụ a dị ka akara ntụkwasị obi na ụlọ ọrụ anyị - na-ekwughachi njirimara anyị dị ka onye na-ebu ụlọ Belgium. " - Peter Gerber, CEO nke Brussels Airlines.